Momba anay - Owon Technology Inc.
OWON Technology (ampahany amin'ny LILLIPUT Group) dia ISO 9001: 2015 mpanamboatra endrika mpamorona mari-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy fanamboarana vokatra mifandraika amin'ny elektronika sy IoT nanomboka tamin'ny 1993. Notohanan'ny fototra mafy orina amin'ny solosaina tafiditra, fampisehoana LCD ary teknolojia fifandraisana tsy misy tariby, OWON manolotra ny vokatra IoT mahazatra sy ny vahaolana IoT manokana ho an'ny fitaovana, Telco's, mpandraharaha tariby, mpanamboatra trano, fitantanana fananana, mpifanaraka, mpanangona rafitra ary fantsom-pivarotana.
Amin'ny haavon'ny fitaovana, ankoatra ny fanomezana maodely mahazatra isan-karazany, ny OWON dia mamolavola sy manamboatra ihany koa ny takian'ny mpanjifa mifanaraka amin'ny tanjon'izy ireo ara-teknika. Eo amin'ny haavo ny rafitra, ambonin'ireo rafitra IoT ivelan'ny talantalana sy ny rafitra ara-barotra IoT, dia manome Open-API feno ihany koa ho an'ny fampidirana ny rafitra hahatratrarana ny tanjon'ny orinasa tsy miankina.
—— Serivisy ODM matihanina ——
- Alefaso amin'ny fitaovana na rafitra azo tsapain-tanana ny hevitrao
OWON dia za-draharaha tokoa amin'ny famolavolana sy ny fanaingoana ireo fitaovana elektronika voatondro amin'ny filan'ny mpanjifa. Azontsika atao ny manolotra serivisy ara-teknika feno R&D ao anatin'izany ny famolavolana indostrialy & rafitra, famolavolana fitaovana & PCB, famolavolana rindrambaiko & rindrambaiko, ary koa fampidirana rafitra.
—— Serivisy famokarana mahomby ——
- Manolora serivisy feno fonosana hahatratra ny tanjon'ny orinasao
OWON dia nirotsaka tamin'ny famokarana volavola vita tamin'ny vokatra elektronika namboarina sy namboarina hatramin'ny taona 1993. Nandritra ny taona maro, OWON dia nanangona traikefa sy fahaizana be dia be amin'ny famokarana vokatra, toy ny Mass Production Management, Supply Chain Management, Total Quality Management, sns.
● Paikady mifototra amin'ny haitao izay manome ny fahaizan'ny R&D sy ny fampiharana teknika.
● 20 taona niainana ny famokarana notohanana niaraka tamin'ny rojom-bolo matotra sy mahomby.
● Reny maharitra sy tsy miovaova ary koa fandraisana anjaran'ny mpiasa mavitrika noho ny kolontsain'ny orinasa "tso-po, fizarana ary fahombiazana".
● Ny fitambaran'ny "Accessibility International" sy "Made in China" dia miantoka ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa avo lenta nefa tsy mahafoy ny fahombiazan'ny vidiny.